မယ်သံ: ပြောပြချင်တယ် သူ့အကြောင်း
Posted by Thandar Lwin at Thursday, January 08, 2015
Ma Tint January 8, 2015 at 10:55 PM
ကိုယ်တိုင်မွေးနေ့ကိတ်လုပ်ပေးတယ်နိုင်တာကို အားကျတယ် သန္တာရေ....
သူ့အကြောင်းနဲ့ဆက်နွယ်ပြီး နေ့စွဲလေးတွေနဲ့အတူ အကြောင်းအရာ စုံစုံလင်လင်ဖတ်သွားပြီ။
yeminthu July 17, 2016 at 4:07 PM
in Min Htet ကိုဒန့်ဒလွန် ခမျာလဲ သုမနကျောမှာ ဒဏ်ရာတွေနဲ့"" ဖြစ်နေတာကိုး
December 5, 2014 at 11:15pm · Like · 6
Yinmon Theint အစ်မရေ ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မယ်စိတ်ကူးလဲ? နောက်တစ်မျိုးမေးကြည့်ရင်ရော ..😊😜
December 5, 2014 at 11:19pm · Like · 1
Ko Thar Ngel
Ko Thar Ngel ရီလိုက်ရတာ ဖတ်ဖတ်မော ရင်ဘတ်နောက်ကကျော
December 5, 2014 at 11:20pm · Like · 2
စု စုအေး ကို တမထ က ကျားကျားချင်း ရိုင်းပင်းသတော့
December 5, 2014 at 11:33pm · Like · 2
Aung Naing Moe LOL .... လျှာရင်းမြက်အောင် ဘဲဥချဉ်ဟင်းလေး ချက်လိုက်။ ဒန့်သလွန်သီးလည်း အနေတော် တုံးတစ်ထည့်။
December 5, 2014 at 11:40pm · Like · 1
Amay Thar အစ်ကိုအောင်နိုင်မိုးပြောသလိုချက်ရင် သေချာတယ်
ဘဲဥချဉ်ရည်ဟင်းလေးနောက်တခွက်ထပ်ထွက်လာမှာ ချက်သာချက် ဒန့် သလွန်တောင့်သာများများထည့် ဟမ်
December 5, 2014 at 11:50pm · Like · 1
Aung Naing Moe ကိုအမေ့သား... အဖော်စပ်နေတာထင်ရဲ့... ဟမ်
December 5, 2014 at 11:54pm · Like · 2
Doreen Tin တတ် လိုက် တာ ဟေ မာ လေး အ မေ ရယ်
December 6, 2014 at 12:48am · Like · 1
Ko Ko Myo
Ko Ko Myo ငါ့သူငယ်ချင်းကတော့ ကြံဖန်ပြီးကို စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားတတ်ပါ့ဗျာ
December 6, 2014 at 7:52am · Like
Leo Avil အမက ကိုဒန့်ကို စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားတတ်ပါ့ဗျာ
December 6, 2014 at 10:50am · Like
Elsie Vuvu ဟဲ့မယ်သန် ဘယ်သူတွေလဲ လုပ်ပါအုန်း လုပ်ပါအုန်း
December 6, 2014 at 2:32pm · Like
yeminthu July 17, 2016 at 4:11 PM
Thandar Lwin ခိခိ ကျေးဇူးမစု ပြင်လိုက်မယ်နော် အပစ် တူ အပြစ် လို့ <3
November 27, 2014 at 10:52am · Like · 1
Linda Tin အပြောင်းအလဲလေးးးး ကိုမောင်ချစ် လို့ :)
November 27, 2014 at 10:54am · Unlike · 2
Zayyar Swe တော်တော်လည်တဲ့ သူငယ်ချင်း :-)
November 27, 2014 at 12:57pm · Like
Kyaw Swar ကဲဗျာ ကိုချစ်မောင် ကို ဖုန်းဆက်ပြီး ပေးလိုက်ဘီ
Kyaw Swar's photo.
November 27, 2014 at 1:59pm · Unlike · 1
Thandar Lwin အညားကြီးပဲတော်
November 27, 2014 at 1:59pm · Like
Thandar Lwin ပြန်လာတာ မြန်ထှာ Kyaw Swar
November 27, 2014 at 2:00pm · Like
Kyaw Swar အားဘု စကားပြောနေဒယ်
Thandar Lwin Zin Min Nyein ဆရာသမား လာ Like တာ ရေးလို့ထောက်ခံလိုက်တာပဲလား
November 27, 2014 at 2:01pm · Like
Zin Min Nyein ရေးတတ်တာလေးကိုဖတ်ပြီး ပြုံးမိလို့ပါ။ ပြီးမှဈေးကရောင်းရသေးဘူး၊ ဟိုဟာလေး ငါကြိုက်လို့ ဖယ်ထားလိုက်အုံးနော်ပြောတာကို စိတ်မဆိုးရဘူးနော်။။။ဟဟ :D
November 27, 2014 at 2:04pm · Unlike · 1
Nilar Soe တော်ထှာအေ တို့ နဲ့တော့ကွာပါ့
November 27, 2014 at 10:32pm · Like
yeminthu July 17, 2016 at 4:13 PM
စုအေး ဟုတ်ပါ သန်သန်ရယ်
တို့မလဲ ယောင်းမကြီးလက်မှာကိုင်လို့ ပါးစပ်အဟောင်းသားပါတော်
November 27, 2014 at 10:01am · Unlike · 6
Khaing Thazin မနေ့က ဒုတိယပိုင်းကန်သလိုသာ စကတည်းက ကန်ခဲ့မယ်ဆိုရင် မလေးနဲ့ပွဲမှာ ၁ဂိုးကြော ၂ဂိုးကြောနဲ့နိုင်မှာပဲ၊ စလုံးနဲ့ပွဲလည်း သရေလောက်ထိန်းထားနိုင်မှာပဲ ... အဲ့လိုတွေးမိတာပဲ။ သိပ်တော့ နားမလည်ပါဘူး။
November 27, 2014 at 10:14am · Like · 2
Thandar Lwin ဒုတိယ ပိုင်းအစမှာ ကန်သလိုကန်ဖို့ ကြည်လင်းကို ပထမပိုင်းမှာ နည်းပြက ထည့်မထားခဲ့ဘူးတဲ့ ။ ပွဲက လဲ အစအဆုံး ၃ နာ၇ီကန်ရမှာဆိုတော့ ကြည်လင်းက ၃ နာ၇ီစာကို ကစားဖို့ အင်အားမရှိလို့လား ဘာကြောင့်လဲမသိ ။ အဓိက ကတေ့ာ အားနည်းတာပါပဲ
November 27, 2014 at 10:17am · Like · 4
Khaing Thazin မလေးနဲ့ပွဲမှာတုန်းက ကြည်လင်းနာသွားတယ်လေ
November 27, 2014 at 10:18am · Unlike · 1
Thandar Lwin အခုက ဒုတိယပိုင်း မိနစ်၉၀မှာတောင် ပထမ ဘယ်မှာနေရာချပြီး နောက် ညာဘက် နေရာပြောင်းချတာ ဘာလို့လဲမသိဘူးနော် ။ နည်းပြ ခေါက်ဆွဲစားမစားတော့မသိဘူး ကိုယ်တော့ အိမ်ရောက်တာနဲ့ ခေါက်ဆွဲစားဖြစ်တယ် (ဟမ်)
November 27, 2014 at 10:19am · Edited · Like · 3
Yinmon Theint အစ်မပြောတာ မှန်လိုက်တာ..
November 27, 2014 at 10:18am · Like · 1
Khaing Thazin နောက် သတင်းဆိုးတစ်ခုကြားတာက ၁ဂိုး သိန်း၃၀၀ ဆိုပဲ :-(
November 27, 2014 at 10:19am · Like · 1
Thandar Lwin အင်းးးးးးးးးးးး ရွှေမန်းတင်မောင်သီချင်းလိုပဲ မင်းတို့ကိုလဲအပစ်မတင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘဲ ချစ်ခင် ဟင်ဟင်ဟင် ပေါ့ :P
November 27, 2014 at 10:20am · Like · 4
Thandar Lwin ဂလိုဆိုရင်တော့ သူတို့လိုချင်တဲ့ အောင်မြင်မှူကို သူတို့ယူသွားတာပေါ့နော် ..ကိုယ်လိုချင်တာနဲ့ သူတို့လိုချင်တာ မတူဘူးကိုးးး အိမ်းး Khaing Thazin
November 27, 2014 at 10:21am · Like · 2
November 27, 2014 at 10:24am · Like
စု စုအေး အာ့ဆိုလဲ အချိန်ကုန်လူပန်း သံပြာဖိုးခွေးအဖြစ်ခံ နနိုင်ငံတော်နံနံကြီးကိုသွားရှုမနေတော့နဲ့ပေါ့ကွယ်
November 27, 2014 at 10:27am · Like · 1
Thandar Lwin :'(
November 27, 2014 at 10:28am · Like
Khaing Thazin မတတ်နိုင်ဘူး ... အားပေးမိမှတော့ :-)
November 27, 2014 at 10:31am · Like · 1
Kyaw Soe Minn
Kyaw Soe Minn ပွဲချိန်က ၄၅+၄၅ =၉၀ ဆိုတော့ ၁နာရီခွဲတည်းပါ ။ ပထမပိုင်း ပွဲရှိန်တာနဲ့ ဒုတိယပိုင်း လေးလုံးမြောက်က ကံခေ သွားလို့ပါ ။
November 27, 2014 at 10:37am · Edited · Unlike · 2
Linda Tin ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်နိုင်စေချင်တာနော်
November 27, 2014 at 10:41am · Like
Khaing Thazin အဲ့ဒါ ဘာသဘောလဲ ... မသန်တွေ့ခဲ့လား.. ကွင်းထဲမှာ ဗော်လန်တီယာလုပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းရိုက်လာတာ ... :-(
Khaing Thazin's photo.
November 27, 2014 at 10:45am · Unlike · 1
Thandar Lwin မတွေ့ခဲ့ဘူးသဇင်
November 27, 2014 at 10:47am · Like
Jittoo Monywa အနမ်းတွေဝေပစ်လိုက်စမ်းပါအေ
November 27, 2014 at 7:36pm · Edited · Like